मर्कूस १४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१४ निस्तार-चाड* र अखमिरा रोटीको चाड आउन दुई दिन बाँकी थियो। अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई छल गरेर पक्रने अनि मार्ने उपाय खोजिरहेका थिए। २ तैपनि तिनीहरू पटक-पटक यसो भन्ने गर्थे: “चाडको बेलामा त होइन नत्र त मानिसहरूले हूलदङ्गा गर्न सक्छन्‌।” ३ उहाँ बेथानीमा कुष्ठरोगी सिमोनको घरमा खान बसिरहनुभएको बेला एउटी स्त्री सङ्गमर्मरको भाँडोमा सक्कली अनि असाध्यै महँगो सुगन्धित जटामसीको तेल लिएर आई। त्यसपछि उसले सङ्गमर्मरको भाँडो खोलेर उहाँको टाउकोमा तेल खन्याउन थाली। ४ यो देखेर कसै-कसैलाई चित्त बुझेन अनि यसरी आपत्ति जनाए: “यस्तो सुगन्धित तेलको किन यत्रो नोक्सानी?” ५ किनकि यो सुगन्धित तेल तीन सय दिनारभन्दा बढी मूल्यमा बेचेर गरिबहरूलाई दिन सकिन्थ्यो! अनि तिनीहरू त्यस स्त्रीप्रति असाध्यै रुष्ट भए। ६ तर येशूले भन्नुभयो: “भैगो, छोडिदेओ। तिमीहरू किन उसलाई दुःख दिन खोज्छौ? उसले मेरो लागि असल काम गरेकी छे। ७ गरिबहरू त तिमीहरूसित सधैंभरि हुन्छन्‌ र तिमीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार उनीहरूको भलो हुने काम जहिले पनि गर्न सक्छौ तर म त तिमीहरूसित सधैंभरि हुँदिनँ। ८ उसले जे गर्न सक्थी, त्यही गरेकी छे। उसले यसरी पहिल्यै मेरो शरीरमा सुगन्धित तेल लगाइदिएर मेरो मृत्युपछि मलाई गाड्न तयारी गरेकी छे। ९ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, सारा संसारभरि जहाँ-जहाँ सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ यस स्त्रीले गरेकी कुरा पनि उसको सम्झनामा सुनाइनेछ।” १० तब बाह्र जनामध्ये एक, यहूदा इस्करियोत उहाँलाई धोका दिन र मुख्य पुजारीहरूको हातमा सुम्पिन उनीहरूकहाँ गए। ११ यो सुनेर उनीहरू खुसी भए अनि तिनलाई चाँदीको पैसा दिने वाचा गरे। त्यसैले उहाँलाई धोका दिने राम्रो मौका तिनले खोज्न थाले। १२ अखमिरा रोटीको चाडको पहिलो दिन यहूदीहरू आफ्नो चलनअनुसार निस्तार-चाडको बलि चढाउँथे। त्यस दिन चेलाहरूले उहाँलाई भने: “हामी कहाँ गएर निस्तार-चाडको भोज तयार पारेको तपाईं चाहनुहुन्छ?” १३ तब उहाँले आफ्ना दुई जना चेलालाई यसो भनेर पठाउनुभयो: “तिमीहरू सहरमा जाओ अनि त्यहाँ तिमीहरूले घैंटोमा पानी बोकेको मानिसलाई भेट्नेछौ। उसको पछि-पछि लाग। १४ अनि ऊ जुन घरभित्र पस्छ, त्यसको घरधनीलाई भन, ‘गुरुज्यूले सोध्नुभएको छ: “मैले आफ्ना चेलाहरूसित निस्तार-चाडको भोज खाने पाहुना-कोठा कहाँ छ?” ’ १५ तब उसले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजिसजाउ गरेर ठिक्क पारिराखेको ठूलो कोठा देखाउनेछ। अनि त्यहीं हाम्रो लागि तयारी गर।” १६ त्यसैले चेलाहरू गए र सहरभित्र पसे। अनि उहाँले जस्तो भन्नुभएको थियो, तिनीहरूले त्यस्तै पाए। त्यहाँ तिनीहरूले निस्तार-चाडको लागि तयारी गरे। १७ साँझ परेपछि उहाँ बाह्र जना चेलासित आउनुभयो। १८ अनि उहाँहरू टेबुलमा बसेर खाइरहेको बेला येशूले भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, मसँगै खाइरहेको तिमीहरूमध्ये एक जनाले मलाई धोका दिनेछ।” १९ यो सुनेर तिनीहरू दुःखी हुन थाले र पालैसित उहाँलाई सोध्न थाले: “के त्यो म हुँ?” २० उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मसँग एउटै कचौरामा चोप्ने बाह्र जनामध्ये एक हो। २१ यो कुरा साँचो हो कि मानिसको छोरा आफ्नो विषयमा लेखिएअनुसारै जाँदैछ तर मानिसको छोरालाई धोका दिनेलाई धिक्कार छ! त्यो मानिस त जन्मँदै नजन्मेको भए त्यसको लागि बेस हुनेथियो।” २२ अनि खाँदै गर्दा उहाँले एउटा रोटी लिनुभयो अनि प्रार्थना गरेपछि भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभयो र यसो भन्नुभयो: “लेओ, यो मेरो शरीरको प्रतीक हो।” २३ त्यसैगरि, कचौरा लिएर उहाँले प्रार्थना चढाउनुभयो र तिनीहरूलाई दिनुभयो। अनि तिनीहरू सबैले त्यसबाट पिए। २४ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यो ‘करारको मेरो रगतको’ प्रतीक हो, जो थुप्रैका लागि बगाइनेछ। २५ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, परमेश्वरको राज्यमा नयाँ दाखमद्य नपिएसम्म अबदेखि म कुनै पनि हालतमा दाखमद्य पिउँदिनँ।” २६ अन्तमा, स्तुतिगान गाइसकेपछि उहाँहरू जैतुन डाँडामा जानुभयो। २७ अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू सबैले ठेस खानेछौ, किनकि यस्तो लेखिएको छ: ‘म गोठालोलाई प्रहार गर्नेछु र भेडाहरू तितरबितर हुनेछन्‌।’ २८ मलाई मृत्युबाट ब्यूँताइएपछि म तिमीहरूभन्दा अघि गालील जानेछु।” २९ तर पत्रुसले उहाँलाई भने: “अरू सबैले ठेस खाए पनि म भने ठेस खानेछैन।” ३० तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “म तिमीलाई साँचो-साँचो भन्छु, आज, हो यही रात, भाले दुई चोटि बास्नुअघि तिमीले समेत मलाई तीन पटक तिरस्कार गर्नेछौ।” ३१ तर तिनले यसो भन्दै जिद्दी गर्न लागे: “तपाईंसँगै मर्नु पऱ्यो भने पनि म कुनै हालतमा तपाईंलाई तिरस्कार गर्नेछैन।” अरू सबैले पनि त्यसै भन्न थाले। ३२ उहाँहरू गेत्समनी भनिने ठाउँमा पुग्नुभयो र उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “मैले प्रार्थना गरुन्जेल तिमीहरू यहीं बसिरहनू।” ३३ अनि उहाँले पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई आफूसित लैजानुभयो। तब उहाँ खिन्न र असाध्यै विचलित हुन थाल्नुभयो। ३४ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मलाई मेरो ज्यानै* जाला जस्तो गरी अत्यन्तै दुःख लागेको छ। तिमीहरू यहीं बस र जागा रहो।” ३५ त्यसपछि अलि पर गएर उहाँले घुँडा टेक्नुभयो अनि सम्भव छ भने यो समय टरिजाओस् भनेर प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। ३६ अनि उहाँले यसो भन्नुभयो: “अब्बा,* हे बुबा, तपाईंको लागि सबै कुरा सम्भव छ। यो कचौरा * मेरो सामुन्नेबाट हटाइदिनुहोस्। तैपनि म जे चाहन्छु, त्यो होइन तर तपाईं जे चाहनुहुन्छ, त्यही होस्।” ३७ उहाँ फर्केर आउँदा तिनीहरू निदाइरहेको भेट्टाउनुभयो र उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो: “सिमोन, के तिमी निदाइरहेका छौ? के तिमी एकछिन जागा बस्न सकेनौ? ३८ परीक्षामा नपर्न तिमीहरू जागा रहो र प्रार्थना गरिरहो। मन त साँच्चै तयार छ तर शरीर भने कमजोर छ।” ३९ उहाँ फेरि जानुभयो र त्यस्तै प्रार्थना गर्नुभयो। ४० अनि उहाँ फेरि फर्कनुभयो र तिनीहरूलाई निदाइरहेका भेट्टाउनुभयो, किनकि तिनीहरूका आँखा लोलाएका थिए। त्यसैले उहाँलाई के जवाफ दिने भनेर तिनीहरूलाई थाहै भएन। ४१ उहाँ तेस्रो पटक आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यस्तो बेला पनि तिमीहरू कसरी निदाउन र आराम गर्न सकेका! बस, अब निदाउन पुग्यो! बेला आइपुगेको छ! हेर, मानिसको छोरालाई धोका दिएर पापीहरूको हातमा सुम्पिइनेछ। ४२ उठ, हामी जाऔं। हेर, मलाई धोका दिने मानिस नजिकै आइपुगिसकेको छ।” ४३ अनि उहाँ बोल्दाबोल्दै, बाह्र जनामध्ये एक, यहूदा आइपुगिहाले र मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्म-गुरुहरूले पठाएको भीड पनि तिनीसँगै तरबार र लाठोहरू लिएर आयो। ४४ उहाँलाई धोका दिनेले तिनीहरूलाई एउटा यस्तो चिन्ह दिने पहिल्यै सहमति भइसकेको थियो: “म जसलाई चुम्बन गर्छु, येशू उहाँ नै हुनुहुन्छ; तिमीहरूले उहाँलाई हिरासतमा लेओ र होसियारीसाथ लैजाओ।” ४५ अनि तिनी सोझै उहाँकहाँ गए र यसो भने: “हे रब्बी!” अनि उहाँलाई चुम्बन गरे। ४६ त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रेर हिरासतमा लिए। ४७ तर त्यहाँ उभिरहेको एक जनाले आफ्नो तरबार थुत्यो र प्रधान पुजारीको दासलाई प्रहार गरेर उसको कान च्वाट्टै काटिदियो। ४८ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरू डाँकुलाई जस्तै गरी तरबार र लाठोहरू लिएर मलाई पक्रन आयौ? ४९ म दिनदिनै मन्दिरमा तिमीहरूसितै बसेर सिकाउँथें, तैपनि तिमीहरूले मलाई हिरासतमा लिएनौ। तर धर्मशास्त्रमा बताइएको कुरा पूरा होस् भनेर नै यो भएको हो।” ५० तब उहाँलाई छोडेर तिनीहरू सबै भागे। ५१ तर जीउमा मलमलको कपडा मात्र ओढेको एक जना जवान मानिस भने उहाँभन्दा अलि परबाट उहाँको पिछा गर्न थाल्यो। अनि भीडले उसलाई पक्रन खोज्दा ५२ ऊ आफ्नो कपडा छोडेर नाङ्गै भाग्यो। ५३ तब तिनीहरूले येशूलाई प्रधान पुजारीकहाँ लगे अनि सबै मुख्य पुजारीहरू, धर्म-गुरुहरू र शास्त्रीहरू त्यहाँ भेला भए। ५४ तर पत्रुस भने टाढै रहेर प्रधान पुजारीको चोकसम्म उहाँको पछि-पछि लागे अनि घरका चाकरहरूसँगै बसेर दन्केको आगो तापिरहेका थिए। ५५ त्यसबीच मुख्य पुजारीहरू र पूरै यहूदी न्यायपरिषद् येशूलाई मार्न उहाँको विरुद्धमा साक्षी दिने मानिस खोजिरहेका थिए तर तिनीहरूले कोही भेटेनन्‌। ५६ हुन त थुप्रैले उहाँको विरुद्धमा झूटा साक्षी दिइरहेका थिए तर तिनीहरूले दिएको साक्षी आपसमा बाझियो। ५७ साथै, केही मानिसहरू अघि सरेर यसो भन्दै उहाँको विरुद्धमा झूटा साक्षी दिंदै थिए: ५८ “यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौं, ‘मानिसको हातले बनाएको यो मन्दिर म भत्काउनेछु अनि मानिसको हातले नबनाएको अर्को मन्दिर तीन दिनमा बनाउनेछु।’ ” ५९ तर यसमा पनि तिनीहरूको कुरा बाझियो। ६० अन्तमा तिनीहरूसामु प्रधान पुजारी उठे अनि येशूलाई यस्तो प्रश्न सोधे: “के तँ केही जवाफ दिंदैनस्? यी मानिसहरूले तँलाई जे आरोप लगाउँदैछन्‌, त्यसबारे तँ के भन्छस्?” ६१ तर उहाँ चूप लागेर बस्नुभयो र केही जवाफ दिनुभएन। फेरि प्रधान पुजारीले उहाँलाई प्रश्न गर्न थाले: “के तँ परमपिताको छोरा, ख्रीष्ट होस्?” ६२ तब येशूले भन्नुभयो: “म हुँ। अनि तपाईंहरूले मानिसको छोरालाई सर्वशक्तिमान्‌को दाहिनेपट्टि बसिरहेको र आकाशका बादलहरूसित आउँदै गरेको देख्नुहुनेछ।” ६३ यो सुनेर प्रधान पुजारीले आफ्नो लुगा च्याते र यसो भने: “अब हामीलाई अरू साक्षी किन चाहियो र? ६४ तिमीहरू आफैले ईश्वरनिन्दा सुनिहाल्यौ। तिमीहरूको विचार के छ?” तिनीहरू सबैले उहाँलाई मारिन योग्य ठहराए। ६५ तब कसै-कसैले उहाँलाई थुक्न थाले र उहाँको अनुहार छोपेर मुड्कीले हिर्काउँदै यसो भन्न लागे: “तँलाई हिर्काउने को हो, लौ भविष्यवाणी गर्!” त्यसपछि अदालतका अफिसरहरूले उहाँको गालामा चड्कन हानेर उहाँलाई लगे। ६६ पत्रुस तल चोकमा भएको बेला प्रधान पुजारीको एउटी नोकर्नी आई ६७ र आगो तापिरहेको पत्रुसलाई देखेपछि सीधै तिनलाई हेरेर यसो भनी: “तपाईं पनि त यस नासरी येशूसँगै हुनुहुन्थ्यो नि!” ६८ तर तिनले नकार्दै यसो भने: “न म उहाँलाई चिन्छु, न त तिमी जे भन्दैछ्यौ, त्यो बुझ्छु।” अनि तिनी निस्केर मूल-ढोकातिर गए। ६९ अनि त्यस नोकर्नीले तिनलाई देखेपछि सँगै उभिरहेकाहरूलाई फेरि भन्न थाली: “यो मानिस पनि तिनीहरूमध्येकै हो।” ७० तिनले फेरि नकार्न थाले। अलिक समयपछि, सँगै उभिरहेका मानिसहरूले पत्रुसलाई यसो भन्न लागे: “तिमी पक्कै पनि तिनीहरूमध्येकै हौ, किनकि तिमी गालीली नै हौ।” ७१ तर तिनले कसम खाँदै फेरि नकार्न थाले: “तिमीहरू जसको विषयमा कुरा गर्दैछौ, मैले त्यो मानिसलाई चिनेकै छैन।” ७२ त्यतिखेरै भाले दोस्रो चोटि बास्यो अनि येशूले भन्नुभएको यो कुरा पत्रुसले सम्झे: “भाले दुई चोटि बास्नुअघि तिमीले मलाई तीन पटक तिरस्कार गर्नेछौ।” अनि तिनी साह्रै दुःखी भए र धुरुधुरु रोए।
^ मर्कू १४:१ * मत्ती २६:२ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १४:३४ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १४:३६ * अरामी शब्द, जसको अर्थ हो, “हे बुबा।”
^ मर्कू १४:३६ * मत्ती २६:३९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।